Dambudziko repasi repasi rave kuwanikwa kune wese munhu | Ndinobva mac
Mangwanani ano chaiwo dambudziko reZuva rePasi rakaonekwa kune avo vashandisi vane iyo Apple Watch. Maawa mashoma mushure mekuparura mushumo wayo wekutarisira nharaunda uye kuti vashandi vezvitoro zvese zveApple mupasi vanopfeka t-shirts girini mukuremekedza nyika, isu tatova nedambudziko reSvondo.
Chinhu chakakosha mudambudziko iri kuita zvekusimbisa muviri uye saka muchiitiko ichi kuedza kwakanyanya hakudiwe, kungoita chero kudzidziswa kwemaminetsi makumi matatu kana kudarika kwaringana. kutitorera iyi budiriro nyowani, zvimanamiti zvakasiyana zveMessage application uye uve wakaringana.
Tinoziva kuti Svondo inodhura, asi Maminitsi makumi matatu enda chaizvo uye chero munhu anogona kukwira ndokuwana iri dambudziko. Hapana chairo chiitiko chinokumbirwa, saka tinogona kuenda kunofamba, kutora bhasikoro kana chero chinhu chatinoda kunze kwekufamba.
Matambudziko aya anotibatsira
Pasina mubvunzo, kune avo vanoziva nezve chiitiko chemuviri, ivo vanoziva kwazvo kuti izvo zvazvinoda kutanga, kana tangoita chiitiko chemuviri kekutanga zvinokwanisika kuti tinochida nekuenderera nacho. Kune rimwe divi, nehuwandu hwezviitiko zvemitambo zviripo nhasi, zvinotiomera kuti tisafarire chimwe chinhu uye kana zvisiri, tinogona kugara tichifamba.. Iyo Apple Watch yakwanisa kumisikidza mune vazhinji vashandisi chishuwo chekurovedza muviri Uye Svondo ino tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe chete vanoenda kunonetsa uye mushure meizvi, vamwe vachauya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko repasi repasi rave kuwanikwa kune wese munhu
Tsvaga kana yako email account yakabiwa nekuda kwe "ndakabatwa here?"